Isefu Best umbhobho sentsimbi umenzi kunye Factory | EWenyue
Isefu yentsimbi engenamthungo kumbhobho ishushu-dip iqaqanjiswa, ke isixa sezinki nesingxobo siphezulu kakhulu, umndilili wobunzima bezinto zokutyabeka zingaphezulu kwe-65 microns, kunye nokumelana kwayo kukwahluke kakhulu kunombhobho oshushu oshushu. Umenzi ombhobho we-galvanized oqhelekileyo unokusebenzisa umbhobho obandayo obandayo njengombhobho wamanzi kunye negesi. Ukutyabeka kwe-zinc kumbhobho wesinyithi obandayo ngumbane owenziwe ngombane, kwaye umaleko we-zinc wahlulwe kumbhobho wentsimbi. Umaleko we-zinc unciphile kwaye kulula ukuwa ngenxa yokuba uncanyathiselwe kumbhobho wentsimbi. Ke ngoko, ukumelana kwayo nomhlwa akuhambi kakuhle. Akuvumelekile ukusebenzisa umbhobho wentsimbi obandayo njengombhobho wokuhambisa amanzi kwizakhiwo ezitsha zokuhlala.
Isefu yentsimbi kwalenza isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo, oomatshini, umgodi wamalahle, ishishini leekhemikhali, amandla ombane, izithuthi zikaloliwe, ishishini leemoto, uhola wendlela, ibhulorho, isikhongozeli, izixhobo zemidlalo, oomatshini bezolimo, oomatshini beoyile yepetroleum, oomatshini bokujonga kunye namanye amashishini okuvelisa.
Idiphu Hot sentsimbi kwalenza umbhobho: idiphu eshushu iqaqanjiswa umbhobho kukwenza intsimbi etyhidiweyo ukusabela ngesinyithi matrix ukuvelisa ingxubevange umaleko, ukuze matrix kunye ukutyabeka zidityanisiwe. Ukuze kususwe i-iron oxide yentsimbi phezu kombhobho wentsimbi, emva kokukhethwa, umbhobho wensimbi ucoceka nge-ammonium chloride okanye isisombululo se-zinc chloride e-aqueous okanye itanki yesisombululo esixubileyo se-ammonium chloride kunye ne-zinc chloride, emva koko ithunyelwe kwi-tank galvanizing eshushu. Idiphu Hot galvanizing inezibonelelo ukutyabeka efanayo, adhesion olomeleleyo kunye nobomi inkonzo ende. Impendulo ezimbaxa zomzimba kunye neekhemikhali phakathi kwe-substrate yombhobho oshushu oshushu oshushu kunye nebhafu etyhidiweyo ikhokelela ekwenziweni komaleko we-zinc ferroalloy onobumbano lokumelana nokubola. Uluhlu lwengxubevange luhlanganiswe nomaleko omsulwa we-zinc kunye ne-matrix yentsimbi, ngoko ke ukuxhathisa kwayo kukomelela.
Ingqele yentsimbi kumbhobho kwalenza: umbhobho iqaqanjiswa kwalenza yi-electro iqaqanjiswa, isixa sezinki nesingxobo yi-10-50g / m2 kuphela, kunye nokumelana kwayo kukwahluke kakhulu kuleyo yombhobho oshushu wediphu. Ukuqinisekisa umgangatho, uninzi lwabenzi beepayipi ezakhiwe ngesinyithi rhoqo abazisebenzisi i-electro galvanizing (ingqele ebandayo). Kuphela ezo zincinci, izixhobo ezindala zamashishini amancinci zokusebenzisa i-galvanizing, ewe, amaxabiso abo atshiphu. Icandelo loMphathiswa Wezokwakha libhengeze ngokusesikweni ukushenxiswa kwemibhobho ebandayo ebuyela umva, kwaye akuvumelekanga ukusebenzisa imibhobho ebanjiweyo ebandayo njengemibhobho yamanzi neyegesi. Ukutyabeka kwe-zinc kumbhobho wesinyithi obandayo ngumbane owenziwe ngombane, kwaye umaleko we-zinc wahlulwe kumbhobho wentsimbi. Umaleko we-zinc unciphile kwaye kulula ukuwa ngenxa yokuba uncanyathiselwe kumbhobho wentsimbi. Ke ngoko, ukumelana kwayo nomhlwa akuhambi kakuhle. Akuvumelekile ukusebenzisa umbhobho wentsimbi obandayo njengombhobho wokuhambisa amanzi kwizakhiwo zokuhlala ezintsha.
Egqithileyo Ikhoyili yentsimbi engenasici
Okulandelayo: Ikhoyili yentsimbi